Waqtiga khasaaray ee aan hadda ku hayo istiraatiijiyadeyda, mise nasiib xumo munaasabadaha 'dabacsan'? | FXCC Blog
Waqtiga khasaaray ee aan hadda ku hayo istiraatiijiyadeyda, mise nasiib xumo munaasabadaha 'dabacsan'?
Apr 18 • Inta u dhaxaysa laynka • 9082 Views 1 Comment miyuu waqtigiisii ​​khasaaray aniga oo hadda la kulma istiraatiijiyadeyda, ama nasiib xumo munaasabadaha 'dabacsan'?
Nasiibku waa erey aad u murugo leh isla markaana ifafaale ahaan isweydaarsanaya ganacsiga. Iyadoo sanadihii iyo xaalado badan ay ku jireen si ay u abuuraan istaraatijiyad ganacsi oo lagu guuleysto, ka dibna ugu dambeyntii u keenaan qorshahayaga ganacsiga caddaynta rasmiga ah, waa wax aad u adag inaga midkeenaba inaynu aqbalno in qayb weyn oo ka mid ah guulaha ganacsi ee muddada dheer uu hoos u dhaco si loo arko astaamaha fudud ee nasiibka.
Si loo aqbalo in aan ku jirno naxariista suuqyada iyo in midkeenu aanu saadaalin karayn, oo leh heer kasta oo joogto ah, waxa uu suuqyadu samayn doono marka xigta waa fikrad aad u adag oo aan inoogu qabsan karno. Way adagtahay in la aqbalo fikradda ah in boqolkiiba inta badan ee ganacsigeenu ay khasaarin doonaan si ay u noqdaan kuwo si joogto ah faa'iido u leh. Labada figraan ee kuwan ka mid ah, sida aynu horay u soo sheegnay tirooyinkan hore, ka soo horjeeda sida aynu udoonayno si aan u wajahno imtixaanno badan iyo tijaabooyin aan ganacsigeenu ku qasbayno in aanu wajahno maalin kasta iyo asbuuc kasta.
Ka dib markii aan billowday bilo badan (ama sanado) si aan u abuurno istiraatiijiyad ganacsi oo guuleystay, waxaanan ku bixinnay waqti isku mid ah si loo hormariyo is-edbinta si aan u dhigno qorshaha ganacsiga, waxay caddayn kartaa inay noqon doonto wax qarxin ah istaraatiijiyadu waxay ku bilaabantaa inay guuldareystaan, anagana waxaan gaadhi karnaa, ama waxaan bilaabeynaa in aan ku hanjabanno heerarka hoos u dhaca ee aan ku gelinay qorshaha ganacsiga. Laakiin marka la eego qorshaha iyo istaraatiijiyadayada waa arrin adag in la wajaho.
Sida aan u qaadno talaabo aan qiiro lahayn, si aan u falanqeyno istraatiijiyadeena, ka hor intaan la dhicin ama iska deynin, waa mid ka mid ah tijaabooyinka ugu weyn ee aan wajihi doonno ganacsatada iyo siyaabo badan oo loo maro 'tijaabo ganacsiga nolosha' sida ganacsatada. Iyo dib-u-fiirinta istraatijiyadayada ganacsiga waxaan bilaabi karnaa inaan ogaanno haddii nasiib-darradu ay ka ciyaaraysay qayb ka mid ah khasaarooyinkii ugu dambeeyay. Laakiin xaggee baan raadinaynaa calaamadaha taariikhdeena ganacsiga ee dhowaan nasiib daro nasiib-darro leh ayaa qayb weyn ka ciyaaray ganacsigeena iyo in aysan jirin wax khalad ah oo ku saabsan habkeena iyo istaraatiijiyada guud ee ganacsiga?
Dhibaatooyinka *, waxa ay yihiin marka la eego ganacsiga iyo meesha laga raadinayo calaamadaha iyaga
Maadaama akhristayaasha caadiga ah ee columinteena ay ka go'an tahay inaan daabacno maqaal todobaadle ah oo cinwaankeedu yahay "isweydaarsiga wali saaxiibkaaga?" Taas oo aan ku falanqeynayno xoojinta asaasiga ah ee go'aamin doona qoraallada saameeya saameynta sare ee isbuucyada iyo go'aannada siyaasadeed. Tijaabadan oo sidan oo kale ah waxaan sidoo kale ka dhignaa qaab farsameysan oo farsameyn farsamo ah oo ka faa'iideysanaya inta badan inta badan loo isticmaalo loona gudbiyo tilmaamayaasha. Maxaa ka mid ah qoraagu dhawaan wuxuu ahaa saameyntii aan ku laheyn shaqsiyaadka iyo saameynta ay ku leeyihiin suuqyada aan ganacsiga.
Arrimaha ugu muhiimsan ee ka muuqda Ukraine ayaa ahaa, iyadoo xiisad bilowday gobolka Crimea suuqyada laga iibiyay, gaar ahaan canshuuraha Yurub iyo ka dibna euro. Maaddaama dhibaatooyinka soo noqdey suuqyada ay bilaabeen soo kabashada noocyada. Kadib waxaanu shaki ku jirin in (sida xilli-ciyaareedkii hore ee dalka laga bilaabay Maraykanka) shirkado badan oo tiknoolajiyadeed oo laga soo xigtay NASDAQ xaqiiqdii waxay u qalanteen qiimaha baaxadda leh ee ka soo horjeeda dakhligooda in ay hadda muujiyaan. Markaas waxaan soo maray dib u soo kabashada, laakiin labadii maalmood ee la soo dhaafay Ukraine ayaa dib u soo muuqatay sida colaad hubaysan oo u dhexeeya kooxo saaxiibtinimo Ruushka ah oo ku yaal magaalooyin badan oo Ukraine ah iyo masuuliyadaha ku jira dawladda cusub ee Yukreeniyaanka ah. waxay gaareen gabagabo rabshadeed.
Hadda eegaya dhammaan arimahan soo socda ee kala go ', ama sida koox, ganacsatada badankood waxay goosanayaan naftooda mararka qaarkood, iyada oo ku xiran hadday ganacsade yihiin ama ganacsato ah, dhinaca dhinaca khaldan ee suuqa ayaa u dhaqaaqaya iyada oo aan jirin ayaga oo aan ahayn marka la raacayo qorshahooda. Si kastaba ha noqotee, liistada aan bixinnay dhaqdhaqaaqyadii dhowaan waa mid aan macquul ahayn in ganacsiyo badani ay ganacsi u iibsadaan toddobaadyadii dhawaa, gaar ahaan ganacsatada suuqyada ah iyo tan kahor intaanu ku darsanno dhammaan waa shuruudaha aasaasiga ah ee caadiga ah sida go'aannada asaasiga ah, shaqo la'aanta iyo shaqo la'aanta xogta kale ee dhaqaalaha. Sida haddii xirfaddayada aysan aheyn mid ku filan oo aan kufaraxsaneyno waa inaan kufaraxnaa arimo asaasi ah oo kala duwan oo asaasi ah asbuucyadii la soo dhaafay, taas oo la yaab leh in badan oo naga mid ah naga lumi doono dhul aan ku meel gaadh ahayn annaga oo shaki gelinayna habkayaga guud iyo istaraatiijiyada ganacsiga.
Suurtagal maaha in la saadaaliyo marka ay soo baxayaan tirakoobyadu in ay dhacayaan isla markaana ay si isku mid ah u adag tahay in la ogaado in aan ku jiri karno khadka dabka ee dhacdo hore ah sida ay u dhacayso inta badan ee ka soo horjeeda ganacsigeena ma ahan kuwa tirakoobka saafiga ah ee tirakoobka iyo xisaabta, dib-u-fiirin, tilmaam. Waxaa intaa dheer, ma aynaan iibsan karno wixii dhacay taariikhda in khabiirada xisaabta iyo xisaabta ay tilmaamaan.
Laakiin waxa aan sameyn karno, maaddaama waayo-aragnimadayadu korodho, ayaa habaynaysa 'antennae trading' si aan u ogaano marka aan ku dhexjirneyno miyir-qabadyada miyir-qabka awood u leh oo keeni kara. Markaa waxaan haynaa labo ikhtiyaar oo fudud; inay ganacsi iyo ganacsi aan ganacsi lahayn ...
Waxaannu ka ganacsan karnaa duufaanka daba-galka, ama soo jiidanayo, iyo nasiib-darrada kaliya ee caqligal ah ayaa noo caddeyn doonta taas oo ah go'aanka saxda ah. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo ay tahay dabiiciga ah in su'aal laga dhigo habka iyo istaraatiijigaada marxaladda soo socota iyada oo aan shaki la gelin, waxay noqon kartaa wakhti qaldan oo lagu beddelo ama joojiyo hab horey loo xaqiijiyey. Waqtiga dib-u-eegista waa inuu yimaadaa markaanu aqoonsanno 'xaaladaha' caadiga ah ee ganacsiga, ama sida caadiga ah ee aan ka filan karno adduunka dhaqdhaqaaqa ganacsiga FX, indices, ama badeecadaha, ayaa markale dib ugu soo laabtay deegaankeena ganacsiga.
* Qeexida dadka ka baxsan
Marka la eego tirakoobka, dusha sare waa fiiro gaar ah oo ka fog indha kale.  Dhoofin ayaa laga yaabaa in ay sabab u tahay isbedbeddelka cabirka ama waxay tilmaamaysaa qalad tijaabo ah; mararka qaar waxaa laga reebaa xogta xogta. 
Soo-baxayaashu waxay ku dhici karaan fursad kasta oo qaybinta, laakiin badanaa waxay tilmaamayaan khaladaadka cabbiraadda ama in dadku leeyihiin qaybin culus. Xaaladdii hore waxay rabtaa inay iska tuurto ama isticmaasho tirokoobyo ay u adkeeysteen kuwa soo baxa, halka kiiska dambe ay muujinayaan in qaybinta ay leedahay badbaado sare oo midkuna waa inuu ka taxaddaraa isticmaalka aaladaha ama fikradaha qaadaya qaybinta caadiga ah. Sababta soo noqnoqota ee soo noqnoqota waa isku dhaf ah laba qaybinta, oo noqon karta laba nooc oo kala duwan, ama waxay muujin karaan 'tijaabo sax ah' iyo 'qalad qiyaas'; Tani waxay ku salaysan tahay qaab isku dhafan.
Qodobada ugu weyn ee xogta, xogta qaar ka mid ah ayaa ka fogaan doonta saamiga marka la eego waxa loo arko macquul. Tani waxay u sabab noqon kartaa qalad nidaamsan ama qalad ee aragti ah oo abuuray qoys la aaminsan yahay kala qaybinta itimaalka, ama waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah indha indheyntu ay ka fog yihiin xogta xogta. Dhibaatooyinka ka dambeeya waxay tilmaamayaan xog khaldan, nidaamyo khaldan, ama meelaha aamusnaanta laga yaabo inaysan ansax ahayn. Si kastaba ha noqotee, shaybaarada waaweyn, tiro yar oo ka baxsan waa in la filaa (oo aan sabab u ahayn xaalad qallafsan).
Soo-saarayaasha, oo ah indha-indhaynta ugu daran, waxaa ku jiri kara saamiga ugu sarreeya ama tirada ugu yar, ama labadaba, iyadoo ku xiran hadday yihiin kuwo aad u sarreeya ama hooseeya. Hase yeeshee, saamiga ugu badnaan iyo ugu yaraan ma aha marwalba marxalado sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaanay si aan caadi ahayn uga fogeyn indho-indheyn kale.
« SPX waxay kor u kacday 0.14% ka mid ah toddobaadkii ugu dambeeyay ee lagu soo bandhigay shaxda. CPI-da Kanada ayaa si xoog leh u kordhay, halka Maraykanku sheegayo sheegashada shaqo la'aanta qadar ahaan Qiimaha guryaha cusub ee dalka Shiinaha ayaa kor u riixaya 7.7 sanadka sanadka marka la gaaro bisha Maarso »